Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » Inkosikazi yaseTanzania yokuHamba ngeNkwenkwezi yonwabile Phezulu
Awards • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • News Sustainability • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Inkwenkwezi yokuhamba uZainab Ansell
UNks. Zainab Ansell, umqhubi wenqanawa wabasetyhini, uye wabizwa njengabaphathi abaphezulu baseTanzania abenze kakuhle phakathi koontanga kwilizwe elihlangeneyo phakathi kobhubhane we-COVID-19.
UNks Ansell uvele njengowokuphela komfazi ophetheyo kushishino lwezokhenketho olunezigidigidi ngezigidi kuluhlu lwee-100 zeCEO ezisebenzayo eTanzania ye2021.
Waye waziwa yinkampani yabaphathi, iQela laseMpuma leQela lokuNxibelelana eTanzania.
Ii-CEO eziphezulu ezili-100 ziya kwamkelwa nge-8 ka-Okthobha, ngokudlala indima ebaluleke kakhulu ekwenzeni uqoqosho lweli lizwe lukwazi ukuphinda lubuye emva kwengxaki ye-COVID-19.
"Nksk. UZainab Ansell ngomnye wabaphathi ababhinqileyo bamaxesha ethu. Ulawule ngempumelelo ishishini lakhe ngezaqhwithi zobhubhane we-COVID-19; Ufanelwe kukuphakanyiswa izandla, ”utshilo umphathi wephondo laseMpuma eTshayina u-Allex Shayo.
AmaBhaso aBaphathi abaPhezulu ali-100 afuna ukwamkela nokubhiyozela abaphathi abazimeleyo, ukuxabisa igalelo labo elikhethekileyo kuqoqosho lwelizwe, ukukhuthaza ukwenziwa kwezinto ezintsha, kunye nokuphucula ukusebenza ngokubanzi kwehlabathi elidibeneyo.
Ewe, iTanzania iye yathandwa kukudodobala kwezoqoqosho, enkosi kumlo okhohlakeleyo we-coronavirus otyhale inani elininzi lamashishini ukuba avale iivenkile, eqhuba izigidi zabantu kwintlupheko. Kodwa njengoko oku kusenzeka, UNks Zainab weza neepakeji ezahlukeneyo zokutsalela abakhenkethi basekhaya, mhlawumbi intengiso yeentombi ekhohliweyo, ukwenza ukuba inkampani yakhe isinde kubunzima be-COVID-19. Ukuyila kwakhe kunye nemodeli yoshishino oluzinzileyo igcine imisebenzi iphila kwaye yalwa notshintsho lwemozulu, kunye nokuphakamisa kunye nefuthe labasetyhini abangamakheswa kwiindawo zoluntu lwaseTanzania.
UNks Zainab ngumseki kunye ne-CEO esekwe eTanzania Zara Ukhenketho, Eyasekwa yaza yasekwa ngo-1986 kwingingqi yaseMoshi, eKilimanjaro, kwaye inesidima, inengxaki yokujongana nokungabikho kokusesikweni okwadityaniswa yingcinezelo nokuxhaphaza abantu basetyhini baseMaasai.
Uzukiswa ngokuvelisa iwindow ekhethekileyo yokunceda abasetyhini abangamaMasai abasweleyo kwiinzame zakhe zokubakhulula kwintlupheko, ngoncedo lwemixokelelwane eyingozi yemikhwa yabo yesiqhelo, ngokubaxhobisa ngemali ukuba bathenge izinto ezingavuthiweyo zokwenza ubuhlalu kunye nobugcisa kunye nokuthengisa iimveliso kubakhenkethi.
Ngeziko lakhe lophuhliso labasetyhini, amakhulu abantu basetyhini baseMaasai baxhamla kumzi-mveliso wokhenketho, nanjengoko ubanika ithuba lokubonisa kunye nokuthengisa izinto ezenziwe ngezandla kwiindlela kwiindawo zaseTanzania ezaziwa kakhulu ngabakhenkethi. Eli nyathelo likhule laba yintsika eyomeleleyo yabasetyhini kunye noluntu oluthile olusingathiweyo ngokubanzi.
Ngo-2009, inkampani yamisela iZara Charity, ibuyisela kuluntu olungathathelwa ngqalelo eTanzania kwaye yenze umkhondo wayo kwintshukumo yehlabathi yophuhliso lokhenketho oluzinzileyo. Isisa sijongana nokhathalelo lwempilo, imfundo, intswela ngqesho, kunye nemingeni yabasetyhini kunye nabantwana. UZara uchaphazele amawaka-waka obomi eTanzania, eqeshe ngokuthe ngqo abantu abayi-1,410 ngokusisigxina nangamaxesha onyaka, egcina amawaka eentsapho kwilizwe elinamazinga aphezulu okungaqeshwa.
UZara uye waziwa ngokubanzi ngemizamo yakhe yokukhuthaza uPhuhliso loKhenketho oluZinzileyo e-Afrika, uZainab ephumelele amabhaso amaninzi, efumene amabhaso ali-13 alapha ekhaya nakwamanye amazwe. Phakathi kwazo kubandakanya iMarike yokuHamba yeHlabathi (i-WTM) yeMbasa yoLuntu kunye neBhizinisi loShishino loNyaka woNyaka (2012), i-iconic yezoKhenketho yeeMbasa zeXesha elizayo (2015), kunye ne-African Travel Top 100 Women. UNks. Zainab uye waziwa kwaye wanikwa imbasa ngokuba ngoyena Mfazi uQhelekileyo kwiShishini nakuRhulumente ngu-CEO we-Global Global ngempumelelo yakhe kwiCandelo lezoKhenketho ne-Leisure le-East Africa 2018/2019 ngexesha le-CEO ye-GLOBAL Pan African Awards, kunye ne-Tanzania National Parks ikwamkele iZara Ukhenketho njengelona lizwe lihamba phambili eMpuma Afrika (2019).
Umbutho waseTanzania Abaqhubi beTyelelo (I-TATO) i-CEO, Mnu Sirili Akko, uthe umbutho wakhe uyaziqhenya nomsunguli kunye ne-CEO yeZara Tours ngentliziyo yakhe enobubele yokuxhasa abahlelelekileyo.
UStanley kwai uthi:
NgoSeptemba 30, 2021 kwi-04: 53
Umama Zara ufanelwe kukuphumelela..ebenceda uluntu ngeendlela ezahlukeneyo
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-14: 23
UAlice Ephata uthi:
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-13: 15
I-Zara Tours kukuphefumlelwa kwilizwe lezoKhenketho. Ngaphandle kwengxubakaxaka yendyikitya yokufa, wayigcina intloko yakhe, yintoni umfazi owomeleleyo nonamandla.
Umama Zainab ufanelwe kukuphumelela ukhuphiswano olukhulu ndithetha ukuba mkhulu !!!
Hey Choga uthi:
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-13: 06
Ndiyavuyisana nawe mama, uyifanele loo nto. Siyixabisa ngokwenene imigudu yakho.
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-12: 58
Ukuba lo mama akangomphumeleli, ndiyazibuza ukuba ngubani omnye Votela u-mama Zara namhlanje kwaye mvumele ukuba akhuthaze ngakumbi ilizwe ngokubanzi💫. Umama Zara eLizweni💫💫💫
Ubomi k. Francis uthi:
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-09: 28
Ukusuka apho uthetha ngohambo lweZara, uthetha ngenkampani enkulu nebabazekayo eTanzania kunye ne-Afrika iphela. UZainabu Ansell njengomlawuli ophetheyo ngumfazi owomeleleyo nonamandla. Ngokuqinisekileyo, ukulungele ukuphumelela ukhuphiswano
Inno Mtui uthi:
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-08: 14
Ngaphandle kobhubhane ukwazile ukubonelela ngemisebenzi kwii-Guides Guides, potter kunye neminye imisebenzi emininzi. Ndiyakuvuyela uMama Zara
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-08: 11
Unenkxaso kuluntu olujikeleze yonke indawo emngqongileyo. Ukufanele ngokwenene ukuba ngaphezulu
UZakiah chomboo uthi:
NgoSeptemba 29, 2021 kwi-06: 53
UZainab Ansell kufuneka aluphumelele ukhuphiswano kuba inkampu ilungile kakhulu kukhenketho lwaseZara lukwanceda isisa